MIUI ROM အမျိုးအစားများ (Xiao Mi Phone)
Posted by Fros on October 19, 2015
Stable ROM ကို MIUI Offical ဖြစ်ပြီး Update က တစ်လ/နှစ်လ/တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ပေး တတ်ပါတယ်။ Bug အနေနဲ့ Developer ROM ထက် ပိုနည်းသွားပါတယ်..။
Stable ROM မှာ Global (international) နဲ့ China ဆိုပြီး (၂) မျိုး ကွဲပါသေးတယ်..။
(၁) MIUI 6.4.2.0 (KHKCNCD)
(၂) MIUI 6.5.3.0 (KHKCNCD)
(၃) MIUI 6.4.2.0 (KXDMICB)
MIUI 6.4.2.0 မှာ6= MIUI6, 4.2.0 = Stable ROM version
MIUI 6.5.3.0 မှာ6= MIUI6, 5.3.0 = Stable ROM version
ဒါဆိုရင် KHKCNCD တို့ KXDMICB မှာ ဆိုရင် ပထမ အလုံး K = android version
ဒုတိယနဲ့ တတိယ HK က Device code , စတုတ္ထနဲ့ ပဉ္စမ CN = Region Code ပါ။
K = Kitkat J = Jellybean L = Lolipop
XD = Mi3/4 , XF = MiPad , XE = Mi Note , XI = Mi4i , HJ = Redmi2, HD = Redmi Note
HC = Redmi 1S , HB = Redmi 1
CN = China , MI = Global
Stable ROM မှာကျတော့ Developer ROM မှာဆို Release Date နဲ့ သတ်မှတ်တာမျိုး မရှိပါ။
သူကလဲ MIUI Offical ပါ။ သို့သော် Bug တွေပိုများပြီး Update (OTA) ကိုတော့ တစ်ပါတ် တစ်ကြိမ် ခန့် (တစ်ခါတစ်လေ Holiday တွေမှာလဲ ပေးတတ်ပါတယ် ဥပမာ China Holiday) ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
သူ့မှာလဲ Global နဲ့ China ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားပါတယ်။
MIUI Version တွေနောက်မှာ Beta ဆိုပြီးပါရင် Developer ROM ပါ။ ဥပမာ MIUI 5.8.13 | Beta
ဒါဆို Global နဲ့ China ဘယ်လို ခွဲခြားမလဲ ?
Language မှာ မြန်မာပါရင် Global , Gapps တွေပါရင် Global , Root Access မပါရင် Global ။
China ကတော့ မြန်မာစာမပါ ၊ Gapps မပါပဲ Root Access သာ ပါပါတယ်။
နောက်ပြီး Release လုပ်တဲ့ ရက်စွဲ - ဒါက လွယ်ပါတယ် ဥပမာ MIUI 5.8.13 ဆိုရင် ၁၃.၈.၂၀၁၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ (သို့သော် Stable Version ကတော့ အဲလို မခွဲခြားနိုင်ပါဘူး။)
ဒါပြီး Developer ROM မှာကျတော့ OTA ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းထဲကို ဒေါင်းဖို့ နေရာရှိပါတယ်..။
MIUI website ကိုသွားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဖုန်းထဲကို ၀င်ပါ။ ပြီးနောက် Developer ROM အောက်က Incremental ROM Pack ကို သက်ဆိုင်ရာ အလိုက်ဒေါင်းပါ…။ အဲဒါက OTA Offline ပါပဲ ။ သို့သော် အရမ်း နောက်ကျတဲ့ OTA တွေကို ရှာတွေ့မှာ မဟုတ်ပါ…။
Stable ROM မှာ လဲ ဒါတွေ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါ။
ကဲ ဘာကိုဒေါင်းမလဲ တွေ့ရတာက အများကြီး။ ဒါက ကိုယ့်ဖုန်း MIUI version ပေါ်မှာ မူတည်ပါ တယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းက 5.8.13 ဆို upgrade from 5.8.13 ဆိုတာကို ဒေါင်းပါ။
ဒေါင်းပြီး update လုပ်ရင် ဘယ် MIUI version ကိုရောက်သွားမှာလဲ သိချင်ရင်တော့ upgrade from ဆိုတဲ့ စာသားမဟုတ်ရင် MIUI version ပေါ်မှာ Mouse လေးတင်ထားလိုက်ပါ။ တွေ့ရပါမယ်…။
နောက်တစ်ခုက အခုမှ MIUI ROM တင်မယ့်လူတွေအတွက် Full ROM ကို အရင်တင်ရမယ်လို့ ဆို ထားပါတယ်။
နောက်ပြီး Developer version အမြင့်ကနေ အနိမ့်ကို မပြောင်းရပါ…။ Error လေးတွေတက်လာ မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်..။ ဥပမာ No SIM , No Network , Baseband Unknow …..
MIUI version6?7?
Developer မှာတော့ 5.8.13 ဆိုရင် 5.8.x က MIUI6ဖြစ်ပြီး 5.9.x က MIUI7ပါ။
MIUI7Global 5.9.16 | Beta ဒါကတော့ Global Developer ပါ။
ROM တင်ရင်သတိထားရမည့်အချက်များနှင့် သိထားသင့်သည့်အချက်များ
(၁) Stable ROM တင်ထား Root လုပ်ထားတာကို Update လုပ်ရင် Bootloop ဖြစ်တတ်တယ်။
(ဖြေရှင်းနည်း ROM ပြန်တင်ပါ။ သို့မဟုတ် UnRoot လုပ်ပြီးမှ Update လုပ်ပါ။)
(၂) Global ROM တင်ထားပြီး China ROM တင်ရင်လဲ MI logo မှာ ရပ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့။
(သို့သော် China အလုံးတွေမှာ Global ROM တင်နိုင်သလို International အလုံးတွေမှာ
China ROM တွေတင်နိုင်တယ်လို့လဲ ဆိုထားပါတယ်…. မစမ်းသပ်ရသေးပါ…။)
(၃) China အလုံးတွေမှာ MIUI5ကစပြီး Gapps တွေ ဖယ်ထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာ MIUI 5.4.1.0 (KXDCNCB)
(သို့သော် Global Developer ROM မှာကျတော့ Gapp ပါပါတယ်…။)
(၄) Global Build ကတော့ Stable ROM တွေနဲ့ပဲ ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Redmi 1S ကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့။
ဥပမာ … MIUI 6.4.2.0 (KXDMICB)
(၅) Recovery Mode ထဲဝင်ပြီး Clear Cache လုပ်ပြီးမှ Update လုပ်ရင် MB နည်းသွားတယ်
Credit to Ko Chit Htike